Kintana no jerentsika fa tsy trondro kintana. Momba ny fizahana ny ranomasina
Iray amin'ireo teny filamatra mampihetsi-po indrindra novakiako tao amin'ny memes momba ny fahaketrahana amin'ny Internet ny hoe "Tara loatra ianao raha tsy mahita kontinanta vaovao, saingy mbola tsy ho ela dia tsy hahita planeta vaovao ianao." Ity andianteny mahaliana ity dia manondro ny fampiatoana amin'ny fotoana sasany amin'ny tantara. Ahoana anefa raha ny fotoana no mety amin'ny fikarohana hafa - ny fitrandrahana ny ranomasina?
Ny planetantsika dia toy ny tranon'ireo raibe sy renibenay any ambanivohitra. Azonao atao ny mandeha amin'io mandritra ny androm-piainanao, ary hisy toerana miafina foana izay tsy noeritreretinay akory. Inona no zavatra hita fa teo amin'ny toerana iray foana, fa vao hitantsika io.
Toy izany no misy amin'ny Tany - na dia eo aoriantsika aza ny vanim-potoanan'ny zavatra hita ara-jeografika lehibe, na dia nijanona ho elektrika toy ny talohan'ny andron'i Columbus aza ny dia, na dia tsy nifarana tamin'ny Pillars of Hercules aza ny tontolo fantatry ny eropeana (ie Gibraltar sy ny morontsirak'i Afrika) ... Afaka mahita sy miaina bebe kokoa hatrany ianao.
Izany no antony isan-taona ny gazety siantifika matotra manana lohanteny tena sarotra dia manambara im-polo maro fa karazam-biby vaovao no hita - matetika kely sy tena tsy fahita firy, toy ny amphibiana na bibikely avy any anaty ala mikitroka aza. Indraindray, eo amin'ny tehezan-kazo maniry loatra, saika tsy azo aleha, dia misy zavamaniry bitika kely miseho, izay tsy hitan'ny mason'olombelona teo aloha, mandra-pahatongan'ity dia iray nataon'ny explorer-explorer ity.
Sahona firy tsy fantatra sy tsy ampoizina no miandry antsika? (sary: ​​cocoparisienne, Lisansa pixel)
Tany dia, mbola tsy hita
Indraindray anefa dia ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy - manoratra momba ny zavatra voasarona zava-miafina ny haino aman-jery ary tsy misy porofo firy fa hiova izany. Manoratra izy ireo fa any Amazon dia misy velaran-tany iray manontolo izay tsy nanitsahan'ny olona sivilizasiona iray (tsara, ho azy) ary tsy fantatra loatra izay misy azy. Notantarain'izy ireo ny fomba lavitra, ary na ny fijerin'ny vorona aza, satria avy eo amin'ny tokotanin'ny fiaramanidina ianao dia mahita Indiana avy amin'ny foko iray izay tsy afaka mieritreritra lehilahy iray mitsingevana eny ambonin'ny rahona mandritra ny segondra vitsy.
Notaterin'izy ireo fa any amin'ny nosy iray any amin'ny nosy Andaman - ny Sentinel Avaratra - dia nisy olona mitoka-monina tanteraka nandritra ny an'arivony taona maro, izay tsy haintsika akory ny fiteniny, ary izay fombany mety tsy fantatsika tanteraka - satria ho tonga isika tamin'ny zana-tsipìka na lefon'ny Sentinels, miaro ny fiainany manokana.
Na izany aza, mifantoka amin'ny velaran'ny tany ihany isika - ary ny harena voajanahary tsy mbola voadinika dia miandry antsika koa eo ambanin'ny rano.
Mila miditra lalindalina kokoa ianareo ry tompokolahy
Fotoana vitsy lasa izay dia nahita ny iray amin'ireo filentehana mamirapiratra indrindra amin'ny Internet aho - tranokalan'ny Neal Agarwal iray antsoina hoe "The Deep Sea" (misaotra Neal - fantatro fa azonao atao ny mamaky ny tonoko amin'ny teny poloney azo antoka). Amin'ny alàlan'ny fanodinana ilay tranokala, dia azontsika atao ny mandinika hoe ahoana no nahavitan'ny olona lalina ny fikarohana ny tontolo ambanin'ny tany eto an-tany. Hitanay ihany koa ny zavaboary miavaka miaina amin'ny halalinina iray, ary manome toky anao aho - ny halalin'ny halaliny dia ny biby manintona kokoa iatrehantsika.
Tsy hilazalaza ny haavon'ny rano lalina eto aho - Manoro hevitra aho, tena manoro hevitra, mba hizaha azy io. Avelao fotsiny aho hilaza fa manana biby mahazatra eto ambonin'ny tany isika - misy salmon Atlantika, misy manatee, misy bera polar antsitrika sy clownfish aza (raha tianao "ny trondro Nemo") .
Somary lavidavitra kokoa, hitantsika, ohatra, ny antsantsa isan-karazany, mandra-pahatongantsika any amin'ny halalin'ny 332 metatra - io no teboka lavitra indrindra nahombiazan'ny lehilahy iray nanana scuba. Fotoana fohy taorian'ny nanindrohana 1000 metatra dia mahita solontenan'ny anglerfish isika. Hanontany ianao hoe: "Inona ity henjana tery ity?" Eny, raha nahita trondro nisy "lanterne" ianao (mitana ny toeran'ny decoy) ao aoriana - izany no izy.
Mandritra izany fotoana izany, ny teboka ambany indrindra amin'ny tontolo anaty rano dia ny Challenger Depth, ampahan'ny Marian Trench, manodidina ny 11 metatra ambanin'ny haabon'ny ranomasina. Ary na lehilahy aza tonga tany.
"Trieste" - tao anaty fahagagana toy izany no nahavoa ny olombelona ambany (sehatra ho an'ny daholobe).
Sehatra fikarohana tsy misy dikany
Fa maninona aho no manoratra momba izany rehetra izany? Satria mino mafy aho fa, tahaka ny fandinihantsika am-pahavitrihana ny asan'ny NASA na Elon Musk (antsoina hoe Elon Piżmo am-pitiavana ataon'ny mpampiasa internet poloney) amin'ny resaka fandresena ny habakabaka ivelany, dia tokony "hijery ny tongotsika" koa isika rehefa mizaha ny lalina ny ranomasina sy ny ranomasina. Tsy ny sisa tavela amin'ny bakteria na ny mety ho dian-drano avy amin'ny planeta hafa no manisa.
Ny marina dia efa ananantsika - miaraka amin'ny antoka rehetra - ny teknolojia ahafahantsika mizaha am-pitandremana ireo habaka samihafa eto ambanin'ny morontsirak'ireo kaontinanta. Na izany aza - farafaharatsiny raha ny hevitro - tsy laharam-pahamehana ho an'ny zanak'olombelona izany. Mampalahelo - na dia mety mbola mila mandrora teny toa izany aza aho.
Azoko an-tsaina fa mandritra ny folo taona ho avy, amin'ny maha-olombelona antsika, dia hanatsara ny famotopotorana bebe kokoa isika, fitaovana siantifika ary fandroana fandroana rano hamela antsika hitarika fandrefesana sy fandinika isan-karazany ao anaty rano.
Izany dia hanome antsika fotoana tsy manam-paharoa hanitatra ny fahalalantsika ny planeta, angamba ny fanatsarana ny famotopotorana marina ny olana mitovy amin'ireo izay nanelingelina ny sain'ny mpikaroka fahiny - amin'ny fomban'ny Atlantika rehetra sy ny Lemuria hafa, ary koa ny ranomasina "habakabaka" monster. Firy ny solontenan'ny zavamaniry sy zavamaniry vaovao tanteraka no ho hitantsika amin'ity fomba ity? Neptune iray irery no mahalala azy.
Io ilay antsoina hoe blobfish raha misintona azy eny amin'ny habakabaka ianao. Votoatiny azo ifandraisany (aut. Gb89.2, CC0 1.0).
Avoahy ny fakantsary, milomano ilay trondro
Mandritra izany fotoana izany dia eritreritro fa rehefa mandeha ny fotoana, dia tena hitranga tokoa ny fitrandrahana an-habakabaka - ny hafaliana momba ny fizahan-tany anaty rano - sahala amin'ny tranga fizahan-tany - voamarika mafy. Ary amin'ny ho avy, miaraka amin'ny fivelaran'ny fiara anaty rano, dia fialamboly mahazatra izany.
Rehefa dinihina tokoa, tsy mahagaga ankehitriny raha ny mpitsangatsangana mandeha amin'ny fitsangantsanganana anaty rano, na ny vondrona iray manontolo, mazava ho azy mihidy anaty tranom-borona azo antoka, dia mandinika akaiky ny antsantsa. Maninona ny olona iray, raha manana fotoana mety, no mijanona tsy mandeha kilometatra vitsivitsy mankeny amin'ny ranomasina hijery ireo trondro mamirapiratra rehetra ireo sy zavaboary hafahafa hafa miaraka amina lava sy tohotra mihodina.
Mahita olana aho - raha ho an'ny mpahay siansa matotra kosa dia zavatra miharihary sy tena ilaina ny manelingelina faran'izay kely araka izay azo atao eo amin'ny tontolo iainana ianarany, tsy ny mpizahatany rendrika rehetra (na ny mpizahatany aza, izay mpizahatany rehetra) no mahavita - indrisy - mamindra ny makowka ary mitondra tena amin'ny fahatsapana andraikitra mitovy amin'izany.
Impiry no ahitantsika ny fako sisa tavela amin'ny làlambe sy eo amin'ny sehatry ny tranobe manan-tantara? Saika tsy tapaka. Mazava ho azy fa any ambanin'ny rano dia sarotra kokoa ny mamela ny banga any, na dia… Mampatsiahy anao aho fa AMIN'NY rano, izay manenina aho mampatsiahy anao, dia misy tranga toa ny Great Pacific Garbage Patch.
Aza mitondra ahidrano mody
Na izany aza, antsasaky ny olana ihany io. Firy amin'ireo mpizahatany no faly mamporisika - tsy ara-dalàna tanteraka - "fahatsiarovana" amin'ny dia? Firy no namaky sombin-kazo Uluru any Aostralia, sombin-kafin'i Hadrian na ny Mandan'i Sina? Nisy ny sasany tamin'izy ireo.
Fa maninona ny olona iray, tsy misy mpiambina tanteraka, miaraka amin'ny fanampian'ny bathyscaphe manokana (tsy afaka manilika zavatra toy izany isika mandritra ny X taona) no tsy mahazo trondro na algoma mba ho maina ho fahatsiarovana azy? Na inona na inona ilay fôsily dia aleo izy mandeha any am-patana.
Teboka iray hafa izay heveriko fa hodinihin'ny olombelona farafaharatsiny ny hotely anaty rano amin'ny lalina kokoa. Eny, angamba tanàna iray manontolo - tsy maharitra maharitra - amin'ity indray mitoraka ity. Ny nofy momba azy dia efa hita amin'ny sary taloha voatahiry ao amin'ny fivoriamben'ny siansa foronina ary koa amin'ny tantara sy tantara avy amin'ny toetr'andro mitovy amin'izany. Raha miha matanjaka ny siansa dia hanjavona tanteraka ny tantara foronina.
Ny ratsy kokoa aza, raha tondrahintsika rano ny mpifanila vodirindrina amintsika amin'ny tanàna toy izany. Ity dia ho loza lehibe kokoa noho ny tsy fahombiazan'ny milina fanasan-damba.
Sary mahafinaritra ho an'ny zava-niainan'ny kapiteny Nemo mampiseho an'i Atlantis. Hahita tanàna tena anaty rano ve isika? (sehatra ho an'ny daholobe).
Amin'ny dian'i Cameron
Izaho dia manintona fahitana iray izay mampidi-doza amin'ny antsasaky ny loza - fa amin'ny raharaha toy izany dia mila mitandrina fatratra izy. Tahaka ny fiahiahantsika ny toetoetran'ny ala, ny morontsiraka madio, ny fitehirizana ireo karazana biby "terrestrial", ary raha madio ny cosmos - voaloton'ny fako eto an-tany bebe kokoa - koa mila mieritreritra ny ny zava-misy momba ny fikarohana amin'ny ho avy (ary angamba fanararaotana koa…) ny halalin'ny planetantsika.
Hatreto (farafaharatsiny izao no fahitako azy), tsy dia misy loatra ny zava-mitranga - nanomboka tamin'ny 1960 (!) Hatrany ambanin'ny Trano Marian ao anaty "Trieste" Don Walsh sy Jacques Piccard dia tsy maintsy niandry 50 taona mahery ny hetsika media faharoa toy izany. Tamin'ny 2012, James Cameron dia nanao zava-bita mitovy amin'izany - eny, ny talen'ny eg. "Terminator", "Titanic" ary "Avatar" ary ... mpaka sary ranomasina.
Vetivety dia hanafaingana ny hafainganam-pandeha hizahana ny den den (azafady, tsy maintsy nataoko vazivazy fiteny ratsy) izany? Antenaiko. Hikarakara ihany koa ny fitsabatsabahana faran'izay kely indrindra azo atao amin'ny tarehy anaty rano an'ny planeta kantontsika isika? Manantena izany bebe kokoa aza aho.
Mandritra izany fotoana izany dia miverina mijery ny pejy lalina aho.
Bul. Oh, denaria kely mampihomehy.